Muuse Biixi oo u tanaasulay Axmed Siilaanyo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa – Mareeg.com: Gudoomiyaha xisbiga Kulmiye ee maamulka Somaliland, Muuse Biixi Cabdi ayaa ku dhawaaqay in uu si rasmi ah ugu tanaasulay hankiisii murashnimo madaxweynaha Somaliland, arrinkaasoo khilaaf badan ka dhex abuuray xisbiga KULMIYE.
Muuse Biixi oo horay ugu gulfiyey inuu xilli doorashadeedka soo socda ka qeybgalo tartanka madaxweynaha maamulka Somaliland ayaa waxaa arrinkaas ku diiday qaar ka mid ah xubnaha xisbiga Kulmiye, kuwaasoo taageeray in madaxweynaha xilligaan ee Somaliland Axmed Maxamed Maxamud (Siilaanyo) uu noqdo murashaxa qura ee Xisbiga KULMIYE.
Khilaaf soo socday muddo dheer ayaa guddiyo dhexdhexaadin ah loo saaray iney xal ka gaaraan khilaafka ragaadiyey xisbiga muxaafidka ah ee maamulka Somaliland, waxaana shalay Muuse Biixi ku dhawaaqay inuu u tanaasulay Axmed Siilaanyo, kaasoo u tartamaya xilka madaxtinimo doorshada soo socota.
Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalkan ka sheegay mar uu shalay shir jaraa’id uu ku qabtay xarunta Xisbiga ee magaalada Hargaysa waxaana uu carabka uu ku dhuftay in aan Xisbiga KULMIYE yeelan karin Laba murashax balse uu yeelan karo oo qudha hal murashax.
Biixi ayaa sida oo kale tibaaxay in kadib markii Xisbiga KULMIYE iyo odyaasha Xisbiguba ay tashadeen uu qofka garta lagu moosay uu isag noqday isla mar ahaantaana uu ku qanacsan yahay waxii ay go’aan soo saareen laga bilaabo shalay oo uu la shaqaynaayo Madaxweyne Siilaanyo.
“Hadii tartan uu dhaco cidbaa adkaata cidna waa la reebaa cidna waa ay soo baxdaa, KULMIYE Murashax qudha ayuun buu yeelanayaa sida Xisbiyada kale oo dhanba, marki Kulmiye iyo odayaashiisii iyo dadka Xoogiisiba ay u cadeeyeen ninka la reebay ee laablaabtay waa aniga taana waan qaatay ninka murashaxnimada loo daayey ee Murashax noqdayna waa madaxweynaha waa ciyaar game ah oo siyaasada Kubada iyo noloshuba ay leedahay” ayuu yiri Mujaahid Muuse Biixi Cabdi.
Madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Siilaanyo oo isaga iyo Muuse Biixi ay ka wada tirsan yihiin xisbiga KULMIYE ayaa markii Biixi ku adkeystay inuu musharrax yahay sheegay inuu diyaar u yahay inuu la tartamo Biixi, inkastoo aysan aheyn wax loo bartay iney iney xilka madaxweynaha ku tartamaan labo siyaasi oo ka wada tirsan hal xisbi.
Xisbiga Kulmiye waxaa horay gudoomiye uha ahaan jiray madaxweynaha maamulka Somaliland Axmed Siilaanyo, wuxuuse xilkaas ku wareejiyey Muuse Biixi markii uu qabtay kursiga madaxweynaha.
Dagaal xalay ka dhacay degmada Ceelbuur